पैसा कमाउने कसरी ?, सफल व्यवसायी शैलेन्द्रराजको सूत्र (भिडियो)
काठमाडौं । शैलेन्द्रराज गिरी सफल व्यवसायी हुन् । केही वर्षअघि उनले मेरो जब डटकम सुरु गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । नेपालआजको ‘पैसा कुराको’ स्तम्भमा उनले खुलेर आफ्ना पैसाबारे अनुभव सुनाएका ...
नारायण वाग्लेको टिप्पणीः सत्यजीत रेका कथा महिलाविहिन (भिडियो)
काठमाडौं । विश्वविख्यात फिल्ममेकर सत्यजीत रे एक सफल लेखक पनि हुन् । भारतीय समाजका सत्यजीत फिल्ममा जसरी प्रयोगशील छन् त्यस्तै लेखनमा पनि । ‘पाथेरपन्चली’जस्तो विश्वप्रसिद्ध फिल्म बनाएका सत्यजीतबारे धेरैलाई धेरैपछि थाहा भयो ...
काठमाडौं । अटोमोबाइल कम्पनीहरुले बिक्री गर्ने गाडी तथा अन्य सामानमा चर्को मूल्य राख्दै उपभोक्तामाथि चर्को ठगी गर्दैआएको खबर सार्वजनिक भए । राजधानीकै केही ठूला घराना व्यवसायीबाटै उपभोक्तामाथि ठग्ने काम निरन्तर हुँदैआयो ...
पूर्वराजाको भारत भ्रमण लुक्लाको मौसमजस्तोः प्रेमसिंह बस्न्यात (भिडियो)
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण लुक्ला को मौषम जस्तो भएको बताएका छन् । ३० सेकेण्डमा घाम लाग्ने र ३० सेकेण्डमा कुहिरो लाग्ने भन्दै त्यससँग उनले तुलना गरेका हुन् । हालै ...
सक्ने भए सिके राउतलाई राज्यले नै खुलामन्चमा फाँसी देओस्ः सञ्जिव कुमार झा (भिडियो)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता तथा युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सञ्जिव कुमार झाले केपी ओली एक युगमा जन्मिने युगनेता भएको बताएका छन् । नेपालआजसँग अन्तरवार्तामा बोल्दै उनले ओलीको राजनीतिमा ...
काठमाडौं । ‘भारतलाई गाली गर्नु नै राष्ट्रवाद’ को मान्यताले बेला बेला नेपाली समाजमा प्रभुत्व जमाउँदैआएको छ । यस्तो मान्यता राजनीतिक दलका नेताहरुले नै स्थापित गरिदिएका हुन्छन् । पछिल्लो समय नेकपा एमाले नेता ...
काठमाडौं । संघीयता नेपालमा २ नम्बर प्रदेशलाई विशेष चासोको रुपमा हेरिँदैआएको छ । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदैआएका मधेश केन्द्रित दलहरु चुनावपछि २ नम्बर प्रदेश सरकार बनाउन जुटेका छन् । यही परिवेशमा नेपालआजले मधेश ...
‘पञ्चायत’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
प्रबिन दाहाल काठमाडौं । फिल्म ‘पञ्चायत’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेता सरोज खनाल र अभिनेत्री नीता ढुंगाना स्टारर फिल्म ‘पञ्चायत’ को आइतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको फिल्मको ...
काठमाडौं । स्थानीय तह, संघीय तथा प्रदेश सभाकाे चुनाव भइसकेको छ । यसपटकको चुनावमा सबैजसो राजनीतिक जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने र लगानी बढाउने वाचा गरेका छन् । तर लाखौं ...
भारत गलेर विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल पठायो (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । अहिले कमचालउ सरकारले नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सरकार हस्तान्त्रणको संक्रमणकालमा भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले नेपाली राजनीति वृत्तमा नयाँ तरंग फैलिएको छ । उनी विना निमान्त्रण एकाएक दुई दिने ...
आँचलले यसरी गरिन् पल शाहलाई लभ प्रपोज ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । ‘नाइ नभन्नू ल–४’ बाट डेब्यु गरेको आचल शर्मा र पहल शाहको जाडी पछिल्लो समयमा खुबै रुचाइएको जोडी हो । यो फिल्म बक्स अफिसमा सफल हुँदा यी दुईको करिअरलाई ठूलो ...
वैकल्पिक राजनीति भनेको भीडतन्त्र हैनः डा. सूर्यराज आचार्य (भिडियो)
काठमाडौं । छोटो अवधिमै विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जमायो । पुराना तथा बारम्बार सरकार हाँक्दैआएका राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली र प्रबृत्तिका कारण नयाँ दल विवेकशील साझाको उदयलाई विशेष चासोका साथ ...
मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य डा. रोकायाको सनशनीपूर्ण दाबीः नेपालमा महिलाअधिकार नै चाहिँदैन (भिडियो)
काठमाडौं । ‘नेपालको राष्ट्रिय पहिचान के हो ?’ ‘यसका आधार के हुनसक्छन् ?’ यस विषयमा धेरै बहस र विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि आउँदैछन् । यस विषयमा धार्मिक अभियन्ता समेत रहेका बुद्धिजीवी तथा मानवअधिकार ...
पशुपतिनाथमा पारस शाहको नयाँ अवतार (भिडियो)
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक ठाउँमा नदेखिएका पूर्वयुवराज पारस शाह मंगलबार दिउँसो पशुपतिको दर्शन गरेका छन् । मिडियाबाट नजर लुकाउँदै शाहले पशुपति, गुहेश्वरीलगायतको छायाँ दर्शन गरेका हुन् । कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित ...
गायिका जुना प्रसाईको अप्ठ्यारोः श्रीमान बिदेश हुनुहुन्छ, बिहेको प्रस्ताव आइरहन्छ (भिडियो)
काठमाडौं । ‘नदेखेको भए हुन्थ्यो तिमिलाई...’ बोलको गीत कहीँ–कतै गुन्जियो भने जुना प्रसाईको हँसिलो चेहरा याद आउँछ । जुन गीतले नै चिनायो जुनालाई । त्यसो त अहिले पनि कुनै स्टेजमा २/३ पटकसम्म ...
ओलीलाई किन प्यारो ‘पोइल जान पाम्’ ? (भिडियो)
काठमाडौं । मुलुक अब संघीय राज्यको संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । केही प्राविधिक काम बाहेक लगभग धेरै कुरा सम्पन्न भइसकेका छन् । सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकिसकेको छ । सोही ...
जसलाई अस्पतालले नै खायो (भिडियोसहित)
२०७४ असोज, कात्तिक र मंसीरमा भरतपुर अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएका पाँच महिलाको ज्यान गयो । उनीहरू २१ देखि २८ वर्षसम्मका थिए । यो मृत्युबारे अस्पतालले औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन । ...
काठमाडौं । गीत सुनेरै आत्महत्या ? यस्तो घटना इतिहासमा कमै हुन्छन् । ‘ग्लूमी सन्डे’ बोलको गीतले अहिलेसम्म पनि मृत्य हुने गरेको विभिन्न समाचार आउँछन् । नेपालमा पनि यस्ता केही घटना भए ...
युवाकाे इनर्जीबाट प्रभावित भइन् अभिनेत्री केकी (भिडियोसहित)
शब्द-नेत्र पाैडेल/तस्विर-चन्द्र रार्इ काठमाडौं । भृकुटीमण्डपस्थित जारी क्यान ईन्फोटेक मेलामा आईटी सम्बन्धी वस्तु किन्न र हेर्न जानेको भीड छ । थुप्रै सामान यहाँ बेच्नका लागि राखिएका छन् । र केही प्रदर्शनीका लागि पनि ...
शान्तिलाई किन ‘मौसमी’ भनिन्थ्यो ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । झापाको माहाभारामा जन्मिएकी शान्ति लिम्बू सानैदेखि नृत्य, लेखन र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सक्रिय हुन्थिन् । हाल लण्डन बस्दैआएकी शान्तिको नयाँ उपन्यास बजारमा छ, ‘मिलिजुली’ । सानैदेखि साहित्य अध्ययन र लेखनमा रुची ...